Waa kuma Guddoomiyaha Guddiga dorashooyinka dadban? | KEYDMEDIA ONLINE
Waa kuma Guddoomiyaha Guddiga dorashooyinka dadban?
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, waxa ay ku guuleysteen qorshahoodii koobaad ee doorashada, kadib markii ay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ka dhigeen shaqsi yaraantiisii ka saaqiday waxbarashada oo ay ku leyliyeen kabo-qaadnimo siyaasadeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Doorasho ay agaasin ka ahaayeen Guddiga Farsamada ee isku xirka howlaha doorashada ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta, oo shalay ka dhacday hoolka weyn ee Teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho, ayaa lagu dooraty Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka dadban ee heer Federaal, FIET.
Xilkaan waxaa ku guuleystay Maxamed Xasan Maxamed (Cirro) oo hore u ahaa guddoomiyihii guddigii lagu muransanaa ee ugu danbayn isku shaandheynta aan buurneyn lagu sameeyay, kadib heshiiskii doorasho ee 27 May.
Maxamed Cirro, wuxuu ku dhashay degaanka loo yaqaanno Wirwir, oo dhaca gobolka Togdheer, ka hor inta uusan qoyskiisu u diga-rogan Jubbada Hoose, xilligas oo Dowladdii Kacaanka ay dib u dejin u sameysay qoysas abaar aafeysay.
Cirro, wuxuu sheegtaa inuu marqaatiga koobaad ee Jaamacadda ka heysto Saxaafadda, hayeeshee dadka yaqaanna ayaa ku doodaya inuu sanadkii koobaad ka saaqiday Jaamacadda lagu magacabo Kenya Methodist University.
Wuxuu heystaa dhalashada dalalka Kenya, Jabuuti iyo Soomaaliya, waxuuna ku dhawaad shan sano ka shaqeynayay Idaacadda Qaramada Midoobey ee ka shaqeysa arrimaha bani’aadanimada oo loo yaqaano ERGO, ka hor inta aan loo raacdeyn falal anshax xumo.
Cirro, malaha khibrad ka baxsan warbaahinta, wuxuuna inta badan waqtigisa galiyay qoralka iyo soo saaridda barnaamijyo warbaahineed, xilligii uu fadhigiisu ahaa Caasimadda Keyna ee Nairobi.
Markii laga raacdeeyay shaqadii Ergo, Wuxuu billawgii 2020-ka u soo guuray Muqdisho, wuxuuna in muddo ah ku noolaa hoyga Taliyaha Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, Fahad Yaasiin, taas oo u suura galisay inuu ku biiro guddigii guriga Maamo Khadiijo lagu qoray ee doorashooyinka.
Wuxuu noqday Gudoomiyaha Guddiga, isagoo garab ka helaya Madaxtooyada, hayeeshee, iyadoo laga duulayo heshiikii 27 May, mucaaradka ayaa Cirro ku daray 66 xubin oo ay cabsho ka qabeen, waxse lagama qaban oo mar kale ayaa guddiga lagu soo celiyay waxaana mar labaad shalay loo doortay Gudoomiyaha Guddigga Doorashooyinka Dadban.
Cirro, wuxuu ka socdaa Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, kuwaas oo doonaya in ay boobaan doorashoonka dalka, kuma xulan aqoon iyo akhlaaq toona ee waa hayin ay soo tababarteen, sida ay sheegayan dadka u dhuun duleela arrimaha doorashooyinka.